I-Giardiasis igama elijwayelekile cishe wonke umuntu. Kodwa abazali abaningi bacabanga ukuthi ukutheleleka kwe-lamblias kuyinto edelelekile futhi engekho engokoqobo, engacabangi ngokuphelele ukuthi kungenzeka ukuthi lesi sifo sitholakale ezinganeni zabo. Phakathi naleso sikhathi, ngokusho kwezibalo zezokwelapha, wonke umntwana wesithathu emhlabeni wonke okungenani wayene-lambliasis. Akunjalo kakhulu, akunjalo?
Kulesi sihloko sizokhuluma ngezibonakaliso ze-giardiasis enganeni, izigaba zokwelashwa nokuvimbela i-giardiasis ezinganeni.
I-Giardiasis ukutheleleka kwe-lamblia (i-parasite ene-celled eyodwa) ehlala emathunjini amancane nesibindi. Ngenxa yomsebenzi wabo obalulekile, umsebenzi walezi zitho kanye nomgudu wokugaya umzimba uphazamiseka, kunezinhlungu esiswini, izithambile, isicashu, ukuhlanza. Kunezinhlobo ezimbili ze-lamblia: i-vegetative ne-cystar. Ifomu lokuqala liyi-parasites enamehlo ehamba phambili (ekhonjiswe ngemuva), ifomu lesibili (ama-cysts) liyadingeka ukuze kube nezinambuzane ukuze kulondolozwe ukusebenza ngaphansi kwezimo ezimbi. Ama-Cysts amancane (cishe a-millimeter) ama-cocoons "ama-oval", angenawo ukuhamba nokubonakaliswa kokuphila. Ngenxa yokuthi kukhona ifomu le-cystaric, i-lamblia ingakwazi "ukulinda" yezimo ezimbi futhi isakaze esikhaleni esingaphezu kwezinto eziphilayo. Ngakho-ke, endaweni yokushisa ephakathi kuka-18 ° C, ama-cysts angahlala ekwazi ukusebenza izinsuku ezingaphezu kwengu-40. Ngesinye isikhathi esimweni esifanele, ama-lamblia cysts akhishwa e-"cocoon", aphinde abuyele esimweni semifino.
Izindlela eziyinhloko zokutheleleka ngeGiardia:
Amanzi . Uma usebenzisa uketshezi oluketshezi. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi i-lamblias ayihlali emanzini olwandle olwandle, ngakho-ke ungenwa igciwane ngokugwinya amanzi ngenkathi ugebha emanzini amasha, kodwa ulwandle olungasolwandle noma amanzi oceanic akunakwenzeka.
Umndeni . Ngokusebenzisa amathawula angcolile, ukusika noma izitsha, amathoyizi, njll.
Ukudla okunempilo . Uma usebenzisa imikhiqizo engcolile - izithelo ezingahlanjululwa, amajikijolo noma imifino, inyama engenawo umzimba.
Lapho ukutheleleka okukhulu komzimba nge-lamblia (nge-acute lambliasis), lezi zimpawu ezilandelayo zingabonwa ezinganeni:
ukushisa komzimba okwandisiwe;
ukuqubuka kuwo wonke umzimba ofana ne-rubella.
Uma kwenzeka lesi sifo sidlulile esimweni esingapheli, kubonakala ukuthi:
indigestion (ukuqotshwa njalo noma isifo sohudo);
ukuhamba kancane (kuze kufike ku-37.5 ° C) ukushisa okushisa (ngokuvamile kusihlwa);
ubuhlungu obuhlungu emathunjini, ikakhulukazi enkabayeni naseceleni kwesokudla;
umsebenzi owehla wezingane;
ubusuku busika busika;
Ukwandiswa kwe-lymph nodes, isibindi, ipeni noma ezinye izitho zangaphakathi;
ukwandisa ezingeni lama-eosinophil egazini.
Indlela yokwelapha i-lambliasis enganeni?
Imithi yokwelapha ye-giardiasis ezinganeni ihlanganisa:
izidakamizwa zokulwa nemithi (metronidazole, nemozol , ummiror, tiberal, chloroquine, tinidazole, furazolidone , paromomycin).
Ukuze ukwelashwa kwe-giardiasis, izingane zinezidakamizwa ezihlukene, kodwa ukukhetha imithi, isikhathi sokwelapha kanye nesilinganiso sinqunywe ngabanye, kucabangela ubudala, isisindo nesimo somntwana jikelele. Ukuzivocavoca akuvunyelwe ngokuphelele. I-Giardiasis yisifo esibi futhi ukwelashwa kwayo kufanele kwenziwe ngaphansi kokuphathwa kwezokwelapha.
Ukudliwa kwe-giardiasis ezinganeni akufanele nje kuthuthukise imimoya yamathumbu, kodwa futhi kwakha izimo ezingahle zokuphindaphinda kwama-parasites. Ukusetshenziswa kwe-carbohydrate elula kuqinisiwe okulinganiselwe, okuthosiwe, okubabayo, ukudla okunamafutha akufakiwe. Ekudleni kukhona imikhiqizo eyenza indima yezinkukhu: i-porridge, imifino ebhakawe, ama-cranberries, ama-cranberries, amapheya, ama-apula, ithanga. Kukhonjiswe nokusetshenziswa kwemikhiqizo evuselela ama-peristalsis emathunjini: i-beetroot, ithanga, ihlanganisa ama-apricot omisiwe kanye nemifula, ubisi olubiziwe obisiwe, utamatisi ovuthiwe, imikhiqizo yobisi omuncu.
Ukuze kuvikelwe i-giardiasis, kunconywa ukuba ugcine indlela yokuphila enempilo, uqinise ukuzivikela, futhi uhambisane nemigomo nemithetho yokuhlanzeka kwakho, ususe imithombo yokutheleleka nge-lamblia (ukuhlukaniswa kweziguli ze-cyst kanye ne-giardiasis).
Ungakhetha kanjani i-nebulizer kubantwana?
Amachashazi olimini lomntwana
Ukwelashwa kokudla emntwaneni - izimbangela kanye nokwelapha okumele wonke umama akwazi
Amavithamini ekukhuleni kwezingane
Indlela yokubona umkhuhlane wengulube enganeni?
I-Lugol Spray for Children
I-Albacid ezinganeni ezinomkhuhlane
Kungani ingane ivame ukubamba?
Viburkol - amakhandlela izingane
Gqoka nge-cut - izithombe ezingu-24 zezingubo ezinhle kunawo wonke kuwo wonke ukunambitheka
Imibhede yezimbali ezweni ngezandla zabo
Ithebula elihlaza okwesibhakabhaka
Ngingakwazi yini ukugeza ngamakhaza?
I-neuropathy yezinzwa ze-ulnar
UCindy Crawford mayelana nobudala bakhe: "Angizami ukuba ngisemncane futhi. Kuyisiphukuphuku futhi kungenangqondo. "
Ukuhlelwa komzimba noma ukuguqulwa komzimba kuhle futhi kubi
Kungani i-headcarf iphupha?
Ukulungiswa kwe-chromium yokulahlekelwa isisindo
Makeup Lana del Rey's
Indlela yokugcina ama-shrimp aquarium?
Izindlela esiteshini sendlu yezwe
Umdlavuza wesibeletho - izindlela zanamuhla zokuxilongwa nokuphathwa
Ukuncelisa ngesisu ekudleni
Yini ewusizo ngejusijusi ijusi lomzimba nokusetshenziswa kwalo ku-cosmetology
Yini ongayinika ngomshado we-porcelain?